अन्तिम समयमा आएर यसकारण बालुवाटार गएनन् बाबुराम – ramechhapkhabar.com
अन्तिम समयमा आएर यसकारण बालुवाटार गएनन् बाबुराम
जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पार्टीका अन्य नेतासँगै अपराह्न ५ बजे बालुवाटार जाने भनिए पनि अन्तिम समयमा आएर उनले आफ्नो योजना परिवर्तन गरेका छन् ।
जसपा नेपालको बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकले राजनीतिक दलहरुसँग उच्च तहमा संवाद गर्ने निर्णयसँगै जसपाका शीर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफलका लागि बालुवाटार गएका हुन् ।
जसपाका नेताहरु महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र महतो, अशोक राई लगायत अपराह्न पाँच बजे बालुवाटार जाने तय भइसके पनि अन्तिम समयमा आएर डा. भट्टराई बालुवाटार नगएका हुन् । उनी स्वास्थ्य समस्याका कारण बालुवाटार नगएको स्रोतले जनाएको छ । दिनभर पार्टीको बैठक तथा अन्य भेटवार्ताका कारण धपेडी भएका कारण उनले बालुवाटार जाने कार्यक्रम रद्द गरेको बताइन्छ ।
पार्टीका अन्य नेताहरु गएको अवस्थामा आफू गइरहन त्यति जरुरीसमेत नरहेको भन्दै डा. भट्टराईले पार्टीका नेताहरुसँगकै सल्लाहअनुसार बालुवाटार नजाने निधो गरेको जसपा नेपाल स्रोतले जनायो ।
जसपा संसदीय दलको नेतामा महन्थ ठाकुरलाई चयन गर्ने तयारी !
पार्टी स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म संसदीय दलको बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका पार्टीका अध्यक्ष ठाकुरलाई दलको नेता चयन गर्नेगरी तयारी अगाडि बढेको छ। यद्यपि दलको नेतामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समेतले दावी गर्दै आएका छन् ।